प्रहरीले जति खोजे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बम्जन ? – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /प्रहरीले जति खोजे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बम्जन ?
काठमाडौं– आफूलाई शान्तिका संवाहक, तपस्वी र लिटिल बुद्ध दाबी गर्दै आएका रामबहादुर बम्जनमाथि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप छ ।
मानिस बन्धक बनाएको, बलात्कार गरेको र हत्या गरेर बेपत्ता बनाएको जस्ता आरोप आरोप उनीमाथि छन् ।
आफूलाई ‘बोधीमार्ग दर्शनमैत्री धर्म’ का प्रवर्तक भन्ने बम्जन अहिले नेपाल प्रहरीको खोजी सूचीमा छन् । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पछिल्लो ६ महिनादेखि निरन्तर लागिपरेको छ । तीनपटक त उनको आश्रममा छापा नै मारिसक्यो तर पक्राउ परेका छैनन् ।
यही असार ४ गते पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) कार्यदलको टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको टोलीले गोलीगठ्ठा, तालिमप्राप्त कुकुर र अत्याधुनिक मेसिनसहित बम्जनको सिन्धुलीस्थित आश्रममा छापा मारेको थियो ।
सीआईबीका प्रमुख डीआईजी सहकुल थापाका अनुसार, बम्जन सिन्धुलीस्थित आश्रममै छन् भन्ने सूचना र प्रमाण पाएकोले प्रहरी टोली उनलाई खोज्दै आश्रम पुगेको थियो । तर, उनी फेला परेनन् । यसअघि २०७६ माघ २४ गते पनि सीआईबी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको टोलीले आश्रममा छापा मारेको थियो ।
त्यसअघि गत पुसमा पनि प्रहरीले बम्जनलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
बम्जन सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९, पहिरेमा पर्ने घना जङ्गलस्थित आफ्नै आश्रममा छन् भन्ने सूचना पाएर यही असार ४ गते प्रहरीले त्यहाँ छापा मारेको थियो ।
उनलाई फेला पार्न नसकेपछि बम्जननिकटका केही अनुयायीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले सोधपुछ गर्‍यो ।
सीआईबी प्रमुख थापा भन्छन्, ‘अनुयायीलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूले बम्जन पाताले ध्यान (जमिनमुनि गर्ने ध्यान) मा गएको भने । कुनै अज्ञात स्थलमा जमिनमुनि ध्यानमा रहेको र अझै दुई वर्ष ध्यानमै रहने उनीहरूको जवाफ थियो ।’
प्रहरीले यस्तो भनाइमा विश्वास गरेको छैन । डीआईजी थापाका अनुसार अनुसन्धानमा बम्जनले पटकपटक मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । ध्यानमा रहेको व्यक्तिले मोबाइल फोन प्रयोग गर्दैन ।
प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार उनी आश्रम आसपासमै कुनै सुरक्षित स्थानमा लुकेर बसेका हुनसक्छन् । यही आधारमा प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ ।
बम्जनको आश्रममा छापा मार्न गएको प्रहरी टोली
बलात्कार र हत्याको आरोप
प्रहरीका अनुसार बम्जनमाथि बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप छ । सीआईबी प्रमुख डीआईजी थापाका अनुसार प्रहरीले विशेष सुरक्षा दिएर गोप्य स्थानमा राखेकी ती बालिका केही दिनअघिमात्र १८ वर्ष पूरा भएकी छन् । उनले नेपालको कानूनअनुसार आफैँले घटनाको विषयमा जाहेरी दिएपछि सीआईबीका अधिकारीले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहितामा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडित नाबालिका भएको अवस्थामा १८ वर्ष उमेर पुगेको एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
सोही प्रावधानअनुसार २०७६ माघ २३ गते जबर्जस्ती करणीको कसुरमा जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट बम्जनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पुर्जी जारी भएपछि पक्राउ गरी बयान लिने काम प्रहरीको हो तर बम्जन पक्राउ परेका छैनन् ।
कानूनी प्रावधानअनुसार पीडित १८ वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नु पर्ने भएकाले अहिले बम्जनलाई फरार अभियुक्त मानेर १४ वर्ष कैद मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सर्लाहीले यही असार १८ गते जिल्ला अदालत सर्लाहीमा जबरजस्तीकरणी मुद्दा दायर गरेको हो ।
यसअघि बम्जनविरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीले २०७६ माघमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार बम्जनमाथि हत्या र व्यक्ति बेपत्ता पारेको आरोप पनि छ ।
सीआईबी प्रमुख डीआईजी थापाका अनुसार बम्जनमाथि आनीहरू सर्लाहीकी रिता बोट, नुवोकोटकी चिनीमाया तामाङ र मकवानपुरकी फूलमाया रूम्बालाई आश्रमबाट बेपत्ता पारेको आरोप छ ।
बम्जनको सुत्ने कोठा ।
बम्जनको आश्रमबाट २०६९ देखि २०७२ बीचमा चारजना अनुयायी हराएको निवेदन तीन जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा सिन्धुपाल्चोकस्थित आश्रमबाट फूलमाया रुम्बा हराएको भन्दै खोजिदिन उनका भाइ विजय रुम्बाले निवेदन दिएका छन् ।
विजयले दिएको निवेदनअनुसार फूलमाया २०७१ माघदेखि बेपत्ता छिन् । फूलमायाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट पनि निवेदन परेको छ ।
नुवाकोटकै मेघान गाउँपालिकाकी चिनीमायाँ तामाङ पनि २०६९ सालमा घर आएकी थिइन् । आश्रम जान्छु भनेर हिँडेकी चिनीमाया पनि बेपत्ता छिन् । चुन्मा भनेर बोलाइने फूलमाया र कर्मा भनेर बोलाइने चिनीमाया बम्जनको आश्रमका आनी थिए
नुवाकोट प्रहरीमा दिदी गङ्गामायाले बहिनी खोजिदिन निवेदन दिएकी हुन् । यी दुईसँगै मकवानपुरका सञ्चलाल वाइबा र बाराका सुरेश आलेमगर पनि बम्जनकै आश्रमबाट हराएको भन्दै खोजीदिन प्रहरीमा निवेदन परेको छ ।
बम्जनले ‘धर्मसंघ बम्जन’ नाममा बाराको तत्कालीन रतनपुरी गाविसबाट जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र बनाएका छन् । रामलाल बम्जनको नाममा २०५२ वैशाख ८ गते नै घर परिवारले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र बनाइदिए पनि २०६९ वैशाख १३ गते रतनपुरी गाविस कार्यालयबाट किर्ते जन्तदर्ता बनाएका थिए ।
प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार यसबाहेक पनि विदेशी युवतीलाई बन्धक बनाएको, विभिन्न व्यक्तिलाई दुव्र्यवहार गरेको, वनको जग्गा कब्जा गरेको, वन फडानी गरेको लगायतका आरोप बम्जनमाथि छन् ।
सीआईबी प्रमुख डीआईजी थापा भन्छन्, ‘हाम्रो हिसाबमा अहिले बम्जन फरार अभियुक्त हुन् । उनीविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा छ । हामी उनलाई खोजिरहेका छौँ । अरू अभियोगहरू आए भने ती पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र विशेष ब्यूरोसम्मको कमाण्ड सम्हालिसकेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको विचारमा गुरु भनेर विश्वास गर्दै नजिकिँदा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ
उनी भन्छन्, ‘धर्मगुरु भनेपछि व्यक्तिले पत्याउने र समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ । त्यहीअनुसार नजिकिँदै जाँदा समस्या बढेको छ । धार्मिक गुरुहरूप्रति विश्वास र अन्धविश्वासका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो ।’
को हुन् बम्जन ?
प्राप्त प्रमाणहरू अनुसार रामबहादुर बम्जनको जन्म २०४६ सालमा बाराको तत्कालीन रतनपुरी गाविस–५, बुङजोरमा भएको हो । उनका मातापिता किसान हुन् । पाँच दाजुभाइमध्ये बम्जन साहिँला हुन् ।
बम्जनले २०६२ जेठ २ मा सुरु गरेको र निराहार भनिएको तपस्या ६ वर्षपछि २०६८ जेठ २ मा सकिएको भनेपछि उनी चर्चामा आएका थिए । बाराको जङ्गलमा तपस्या गर्दै गरेको सार्वजनिक भएपछि ‘लिटिल बुद्ध’ उपमासहित समाचारहरू आएका थिए ।
उनी ध्यान गर्नुअघि भारतका विभिन्न बौद्ध धार्मिकस्थल गएको भनिएको थियो । तर, उनी पोखराको एउटा चामल मिलमा काम गर्दा घाइते भएपछि घरमै बसेको तथ्य बाहिर आएको थियो । त्यति वेलादेखि नै उनको गतिविधि शंकास्पद मानिएको थियो ।
त्यसपछि, ७ वर्षसम्म सर्वसाधारण र परिवारका सदस्यलाई बन्धक बनाएर कुटपिट गरेको घटनाले उनी अर्को विवादमा तानिए । बम्जन कुनै विवाद सुरु भएपछि नयाँ गन्तव्यमा जाने र जङ्गल क्षेत्रमा आश्रम बनाएर बस्ने गरेका छन् । अहिले पनि उनमा असाधारण शक्ति प्रकट भएको उनका आफन्त तथा अनुयायीहरू बताउने गर्छन् ।
कहाँ–कहाँ छन् बम्जनका आश्रम ?
बम्जनले बाराको हलखोरिया वनबाट तपस्या सुरु गरेका थिए । पछिल्लो समय उनी मुलुकका विभिन्न ठाउँमा आश्रम बनाउँदै आफ्नो बासस्थान बनाउन सफल भएका छन् ।
सीआईबीका प्रमुख डीआईजी थापाका अनुसार, अहिले बाराबाहेक सिन्धुपाल्चोक, सर्लाही, लमजुङ, नुवाकोट र मकवानपुरमा बम्जनका आश्रम छन् ।
२०६९ साल असारसम्म हलखोरियाको ९ सय हेक्टर वनक्षेत्र ६ वर्षदेखि बम्जनकै कब्जामा थियो । बम्जनले निषेधित भनेको वन क्षेत्रभित्र स्थानीयबासी प्रवेश गरेको भन्दै पटकपटक कुटपिट गरेको भन्दै बम्जनविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पनि परेको थियो ।
उनले हलखोरिया वनक्षेत्रभित्र इजाजतविनै हरिया रुख ढालेर बाटोसहित एक दर्जन घरटहरा बनाएका थिए । आधुनिक पक्की भवन पनि बनाएका थिए ।
वन फडानी गरेको, जमिन कब्जा गरेको, स्थानीयबासिन्दालाई कुटपिट गरेको लगायत आरोप लागेपछि उनलाई स्थानीय प्रशासनले हलखोरियाबाट हटाएको थियो ।
यता सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९, पहिरेमा पर्ने घना जंगलबीचमा करिब ४० बिघा जमिन ‘बोधीमार्ग दर्शनमैत्रि धर्म’ का नाममा ओगटिएको छ । यसमध्ये करिब २८ बिघा ‘रामबहादुर बम्जन आश्रम’ को स्वामित्वमा छ ।
त्यहाँ आफ्नो स्वामित्वभन्दा बारि चनदेवी र दक्षिणकाली सामुदायिक वनको जमिन ओटगेर भव्य संरचना निर्माण भएका छन् । बोधीमार्ग धर्मका अनुयायीहरू त्यहीँ प्रशिक्षण लिन्छन् ।
अहिले बम्जन कुन आश्रममा बस्छन् भन्ने जानकारी छैन । ‘अहिले उनका सबै आश्रम र सम्भावित स्थानहरूमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । उनी बस्न सक्ने स्थानमा निगरानी बढाएका छौँ,’ डीआईजी थापा भन्छन्, ‘अनुसन्धानका लागि प्रहरीले आवश्यकताअनुसार विपद व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने कुकुरसमेत परिचालन गरेको छ ।’
विपत व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने कुकुरले आश्रमभित्र कसैको हत्यापछि शव पुरिएको छ भने पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ ।
शान्तिका दूत भगवान गौतम बुद्धभन्दा पनि आफूलाई शक्तिशाली, तेजस्वी, ज्ञानी र अहिंसावादी दाबी गर्ने तपस्वी भनिएका रामबहादुर बम्जनका धेरै कर्तुतहरू बाहिर आइसकेका पनि प्रहरीले उनलाई समाउन सकेको छैन ।
तस्वीर स्रोत : केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), नेपाल प्रहरी